ဟဂ်ျခရီးစဉ်အတွင်း လမ်းပျောက်ရှာဖွေနိုင်မည် Smart Phone Application | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Hajj Gets Smart App
Mogoke မိုးကုတ်အလွမ်းပြေ »
“ကျွန်တော်အစက တွေးမိတယ် အကယ်၍များ ဟဂ်ျအတွင်းမှာ လမ်းပျောက်သွားရင် အသုံးပြုလို့ရမဲ့ လမ်းပြကိရိယာမျိုးရှိရင် ကောင်းမှာပဲ” လို့ စတူးဂတ် တက္ကသိုလ်(Stuttgart University) သိပံ္ပ္ပနှင့်နည်းပညာဌာနမှ ဘွဲ့ရခဲ့သူ ဟာဘိဘူရာမန် ဒတ်စ္စတာဂရီ(Habiburrahman Dastageeri)မှ GlobalPost သတင်းဌာနကို မေလ ၂၇ ရက်နေ့ ကပြောကြားသွားပါတယ်။
မစ္စတာ ဒတ်စ္စတာဂရီက ဆက်လက်၍ “မက္ကာမြို့မှ မီနာမြို့သို့အသွားမှာ ဟိုတယ်တွေဟာ လိုတာထက်ပိုအောင် တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆင်တူဖြစ်အောင် ဆောက်ထားတာကြောင့် တချို့ခရီးသည်တွေဆို သူတို့လူစုနဲ့ကွဲသွားပြီး သုံးရက်လောက်ကြာအောင် လမ်းပျောက်နေတတ် ကြပါတယ်။” လို့ဆိုပါတယ်။
အသက် ၃၂ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဒတ်စ္စတာဂရီဟာ မက္ကာမြို့ရောက် မွတ်ဆလင်များ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ဒီApplicationကိုတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “အမှန်တော့ဒါဟာ ကျွန်တော် ထင်ထားသလောက်တော့ မလွယ်လှဘူးဗျ။” သူကဆက်လက်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက သေသေချာချာပြင်ဆင် ပြီးမှခရီးထွက်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ဟိုရောက်သွားတော့ ကျွန်တော်တို့မသိတာတွေ မထင်မှတ်ထားတာတွေကအများကြီးပဲ။”
သူဟာသူ့ရဲ့ မဟာဝိဇ္ဇာသင်တန်းမှာ ဒီApplication မှဟဂ်ျခရီးစဉ်အတွက် prototype GPS system ကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီApplicationကို “Amir”လို့နာမည်ပေးထားပြီး အချိန် (၂)နှစ်လောက်ကြာအောင်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “Amir”ဆိုတာဟာ အာရပ်ဘာသာစကားမှာ “လမ်းညွန်” လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
“ဟဂ်ျလုပ်ကြမည့် ခရီးသည်တွေအတွက် အရေးကြီးဆုံးက ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုဝတ်ပြုမှုမျိုးတွေ လုပ်ရမယ် ဆိုတာသိဖို့ပါပဲ။ “ခရီးသည်တွေက ဒီဝတ်ပြုမှုတွေဟာ နေ့စဉ်ဝတ်ပြုမှုမျိုးတွေလို မဟုတ်တဲ့အတွက် မသိကြပါဘူး။ ပြီးတော့ အိမ်မှာလည်း လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ကြဘူးလေ။”
“အရေးကြီးတာက ဘာသာရေးအရကော နည်းပညာပိုင်းအရပါ အမှားအယွင်းအဖြစ်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူး။” လို့ မစ္စတာ ဒတ်စ္စတာဂရီကဆိုပါတယ်။ iphone ဖြင့် အသုံးပြု၍ရတဲ့ ဒီApplication ဟာ တူရကီ၊ အင်္ဂလန်၊ အာရပ် နဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံများမှာ တွင်ကျယ်စွာ ရောင်းချနေပြီဖြစ်ကာ အခြားဘာသာစကားများ သို့လည်း ဘာသာပြန်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် Android version ဖုန်းများနှင့်လည်း အသုံးပြု၍ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီဂျာမနီလူမျိုး လူငယ်ပညာရှင်ဟာ ဆော်ဒီနိုင်ငံသို့လည်းသွားရောက်ခဲ့ပြီး Baden-Württember ပြည်နယ်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကိုယ်စားလည်နှင့်တွေ့ ဆုံကာ ဒီApplicatioinကို ဟဂ်ျအကျိုးဆောင် အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မစ္စတာ ဒတ်စ္စတာဂရီအနေဖြင့် မိမိတတ်သိထားသော ပညာရပ်ကို ဘာသာရေးအတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ခြင်းဟာ သူ့အတွက် တွန်းအားတရပ် ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ “သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြသနာတစ်ခုကြုံလာရင် အဖြေရှာဖို့ကြိုးစားကြည့်တာပါ။ အမှန်တော့ ဒီဟဂ်ျလုပ်တယ်ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ကျော် ကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။”
“ဒီလိုအခွင့်အလမ်း အသစ်တွေရှိလာခြင်းဟာ ဟဂ်ျခရီးစဉ်အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေမှာပါ။ လူတွေအတွက်လည်း အခက်အခဲတွေကို ကူညီရာရောက်ပါတယ်။ ဒီ အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကို စလုပ်ဖြစ်တာပါ။”
Tags: Android, Global Positioning System, GPS, Handhelds, IPhone, Mainz, Smartphone, Stuttgart University
This entry was posted on July 13, 2012 at 12:12 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.